Militariga Mareykanka oo qorsheynayo inuu yareeyo doorkiisa howlgalka Somalia… – Hagaag.com
Militariga Mareykanka oo qorsheynayo inuu yareeyo doorkiisa howlgalka Somalia…
Tani ayaa muujineysa calaamad kale oo Maamulka Madaxweyne Donald Trump ku yareynayo Ciidamada ka jooga Soomaaliya, iyadoo dhowaan uu ku dhawaaqay inuu kala soo baxayo Ciidamada ka jooga dalka Suuriya.
Warbixinta uu qoray Telefishinka NBC ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu qiimeyn ku sameeyay in Al-Shabaab weli khatar ku yihiin dowladda Soomaaliya iyo dalalka deriska, balse aanan khatar halis ah ku aheyn Mareykanka.
Sidoo kale duqeymaha Mareykanka ka fuliyay Soomaaliya ayaa lagu khaarijiyay xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab, taasoo keentay in awooddii ururka ay hoos u dhacdo.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sanadkii hore kordhiyay ciidamada ka jooga Soomaaliya duqeymaha cirka ah ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Isbedelka qorsheysan ayaa sidoo kale muujinaya in isbedel ballaaran oo istiraatiijiyadeed lagu sameeyo ciidamada Mareykanka, si loo yareeyo awoodaha loo adeegsanayo hawlgallada argagixisada ee Afrika.
Xoghayahii Difaaca Mareykanka ee is casilay Mr James Mattis ayaa dhowaan ka digay qorshaha Mareykanka ku yareynayo howlgalkiisa Soomaaliya.
Tallaabada Mareykanka ku yareynayo howlgalkiisa Soomaaliya ayaa ku soo aaday, iyadoo sanadkii hore ay kordheen duqeymaha Mareykanka ka fulinayo Soomaaliya, taasoo labo jibaar ka badneyd duqeymaha xilligii Maamulkii Barack Obama.